एमसीएसई प्रमाणीकरण - तपाईलाई थाहा छ सबै कुरा - आईटीटी टेक स्कूल
MCSE प्रमाणन - तपाइँलाई थाहा छ
MCSE प्रमाणन गाइड
के MCSE को मतलब छ?
माइक्रोसफ्ट प्रमाणित समाधान विशेषज्ञ (MCSE) आईटी डिजाइन, समाधान र सुरक्षाको डोमेनमा एक्सेल गर्न चाहने कम्प्युटर प्रविधिहरू / इन्जिनियरहरूको लागि डिजाइन गरिएको प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम हो। एक एमसीएसई प्रमाणीकरण इन्फर्मेसन डिजाइन गर्न को लागी साथ साथै स्थापना, कन्फिगर, प्रशासनिक र समस्या निवारण गर्न को क्षमता संग तिनीहरूलाई लैजेर आईटी पेशेवर को रोजगार योग्यता को उद्धार गर्दछ। प्रमाणीकरणले समाधानलाई पनि माइग्रेट गर्न को लागी पेशेवर क्षमताको साथ साथै व्यापारको भविष्यका आवश्यकताहरु / सेवाहरूको प्रणाली पनि प्रदर्शित गर्दछ।
MCSE प्रमाणीकरण कसले प्रदान गर्दछ?
नामले स्पष्ट रूपमा सुझाव दिन्छ, यो प्रमाणिकरण Microsoft द्वारा प्रदान गरिएको छ। एक माइक्रोसफ्ट प्रमाणिकरणले Microsoft को प्रविधिको प्रयोगमा पेशेवरको विशेषज्ञतालाई मान्य बनाउँछ। MCSE प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र को एक सेट को सबै भन्दा लोकप्रिय हो जुन माइक्रोसफ्ट प्रमाणित प्रोफेशनल (एमसीपी) को तहत आने को लागी एक व्यावसायिक क्षमता मा व्यावहारिक र होलिस्ट रूप देखि सफलतापूर्वक विभिन्न माइक्रोसफ्ट उत्पादनहरु को एकीकृत गर्न को लागी एक व्यक्ति को क्षमताओं को निर्माण को लागि तैयार गरिएको छ।
के छ MCSE को उद्देश्य?
MCSE प्रमाणीकरण को मुख्य उद्देश्य उम्मेदवारहरुमा उच्च अन्त तकनीकी योग्यता र विशेषज्ञता सक्षम गर्न को लागी छ। उम्मेद्वारहरू आवश्यक सिक्न सिकेका छन्
नवीन क्लाउड समाधान निर्माण गर्नुहोस्;
एक कुशल र आधुनिक डेटा केन्द्र चलाउनुहोस्;
डिजाइन, लागू र सम्पूर्ण पूर्वाधार वा यसको तत्वहरूको समस्या निवारण;
डेटा, प्रणाली र यसको पहिचान व्यवस्थापन गर्नुहोस्;
सञ्जालसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू।
MCSE प्रमाणिकरणको लागी योग्यता मापदण्ड के हो?
MCSE परीक्षामा देखा पर्न, उम्मेदवारहरू हुनु पर्छ MCSA (माइक्रोसफ्ट प्रमाणित समाधान एसोसिएट) प्रमाणीकरण.
पाठ्यक्रम कत्ति लामो छ?
छनोट गरिएका मोड्युलहरूमा निर्भर हुनाले, पाठ्यक्रम लम्बाईले2महिनाबाट6महिनामा भिन्न हुन सक्छ।
MCSE प्रमाणीकरण पाठ्यक्रमको संरचना:
तपाईं सबै उल्लेख गरिएका वर्गहरूमा MCSE हुन सक्नुहुनेछ। प्रत्येक कोटीमा आफ्नै मुख्य प्रविधिहरू छन् जुन तल सूचीबद्ध छन्:
गतिशीलता -Microsoft Intune, Azure Active Directory, Azure Right Management, System Center Configuration Manager, Windows System Center
क्लाउड प्लेटफार्म र इन्फ्रास्ट्रक्चर -विन्डोज सर्भर वर्चुअलाइजेशन र माइक्रोसफ्ट एवरेज
उत्पादकता -माइक्रोसफ्ट अफिस 365, माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सचेंज, स्काइप को लागि व्यवसाय र SharePoint
डाटा व्यवस्थापन र एनालिटिक्स -SQL सर्भर
व्यापारिक अनुप्रयोगहरू -Microsoft Dynamics 365, SQL Server
MCSE पुनर्सरण के हो - किन यो आवश्यक छ?
माइक्रोसफ्ट प्रमाणीकरण बहुमूल्य र मान्य रहन्छ जबसम्म कम्पनीहरूले प्रमाणीकरण अन्तर्गत राखिएका प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै छन्। समयको अवधिमा, प्रमाणपत्र रेटिना र विरासत बन्नुहोस्। माइक्रोसफ्टले उनीहरूको पुन: सूचना नीति अद्यावधिक गरेको छ जुन सबै आईटी प्रविधिहरूलाई उनीहरूको MCSE प्रमाणपत्रहरू नवीकरण गर्न आवश्यक छ जुन नयाँ प्रविधि अद्यावधिकहरू समय-समयबाट जारी हुन्छन्। आवधिक रूपमा, जब नयाँ प्रविधिहरू र तिनीहरूको परीक्षाहरू द्वारा पेश गरिएको छ माइक्रोसफ्ट, आईटी प्रोफेसरले यी परीक्षाहरू लिनुको साथै पनि आफ्नो क्षमता र ज्ञान उन्नयन गर्न आवश्यक छ।
परीक्षा खाली गर्न तपाईंले कितना स्कोर गर्न आवश्यक छ?
एक एमसीएसई प्रमाणीकरण परीक्षा को क्षमता र प्रविधिको दुवै उम्मेद्वारको क्षमता दुवै को लागी डिजाईन गरिएको छ। तपाईंले माइक्रोसफ्ट परीक्षा खाली गर्न 70% स्कोर गर्न आवश्यक छ। एक समग्र सन्तुलन प्रतिशत प्राप्त गर्नु आवश्यक छ। यदि एक एक कौशल सेट मा एक उच्च प्रतिशत र अर्को कुशलता सेट मा कम प्रतिशत हुन्छ, यो एक FAIL गर्न सक्छ। त्यसकारण, समग्र तयारी महत्वपूर्ण छ। साथै, केवल rote सिकन को सट्टा व्यावहारिक ज्ञान वांछित परिणाम प्राप्त हुनेछ।
पाठ्यक्रम कितना खर्च गर्दछ?
MCSE प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न, एकलाई सात परीक्षाहरू खाली गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक परीक्षाको लागी लगभग रु। 8000। थप खर्चहरूमा अध्ययन सामग्री र अध्ययन गाइडहरू समावेश छन् जुन उम्मेदवारहरू तिर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
एक उम्मेदवारले माइक्रोसफ्ट ट्रेनिंग सेन्टरबाट सहयोगको साथ अध्ययन गर्न रोज्न सक्छ वा एक प्रतिष्ठित संस्थामा सामेल हुन सक्छ र एक तरिकाले संरचित तरिकामा परीक्षाको लागि तयारी गर्न मद्दत गर्दछ।
यो उल्लेख गर्न सार्थक छ, तथापि, कि यस प्रमाणन प्राप्त गर्न को लामो समय मौद्रिक लाभ अब खर्च को लागत मा अधिक देखि अधिक छ।
परीक्षाको समय अवधि
एक MCSE परीक्षा 150 मिनेटमा पूरा हुनु पर्छ। यद्यपि, उम्मेदवारहरूको लागि जसको मूल भाषा अंग्रेजी छैन तर अंग्रेजीमा परीक्षा लिन चुनेको छ, लामो समयसम्म प्रदान गर्न सकिन्छ।
अधिकतर देशहरुमा, पियर्सन VUE केन्द्रहरू छन्, जहाँ उम्मेदवारहरूले यी परीक्षा लिन सक्छन्। यदि उम्मेदवारले प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानमा सामेल गर्ने निर्णय गरेको छ भने, यसको आफ्नै आधारभूत ढाँचा र यसको केन्द्रहरू उम्मेदवारहरू र प्रमाणपत्रका विभिन्न मोडलहरूको लागि उपस्थित गर्न मद्दत गर्न सक्दछ।
MCSE प्रमाणीकरण कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ?
पात्रता मापदण्ड पूरा गर्न, एक MCSE प्रमाणिकरणले उनीहरूको प्राविधिक र व्यावसायिक कुञ्जीहरू प्रमाणित गरेर उम्मेदवारको कार्यक्षमता माथि बढाउँछ। तिनीहरू कम्प्युटर सहायक विशेषज्ञ र सूचना सुरक्षा विश्लेषकको रूपमा कामका लागि योग्य छन्। प्रमाणीकरणले माइक्रोसफ्ट सर्भर प्लेटफार्मको प्रयोग गरेर प्रविधि इन्फिगरेसनको डिजाइन, कार्यान्वयन र प्रशासनिक सम्बन्धमा धेरै कुशलतासँग पेशेवरलाई लैजान्छ।
एक MCSE प्रमाणित पेशेवरले निम्न उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरु मध्ये नौकरी को भूमिका चुन सकते हो:
सञ्जाल / प्रणाली इञ्जिनियर
सूचना प्रणाली प्रशासक
सञ्जाल अपरेसन विश्लेषक
प्रणाली विश्लेषक, र
उम्मेदवारहरूको भविष्य MCSE प्रमाणीकरण परीक्षाका लागि प्रकट हुन्छ
धेरै संगठनहरू विश्वका सबै प्रतिष्ठित ब्रान्डहरूमा माइक्रोसफ्ट उत्पादनहरू प्रयोग गर्छन् र एमसीएस प्रमाणित प्रमाणित व्यक्तिहरू खोज्छन्। यस कोर्सबाट प्राप्त भएका कौशल र ज्ञान एक संगठन भित्र विभिन्न आईटी प्रणालीहरूमा लागू गर्न सकिन्छ र यसैले पेशेवरले संस्था भित्रको रुचिको क्षेत्र रोज्न सक्छ। उच्च वेतनहरू पेशेवरहरु द्वारा एक राम्रो कौशल सेट को द्वारा तैयार गरिन्छन् र यो परीक्षा को सफा गर्न सिर्फ एक को एक छ। यदि कम्प्युटरको विज्ञानमा ब्यासेर्स डिग्री द्वारा उम्मेद्वार प्रमाणीकरण समर्थित छ भने, MCSE प्रमाणित पेशेवर साक्षी देखाउनको लागि कुनै सीमा छैन।
CCNA प्रमाणित पेशेवर - साक्षात्कार प्रश्न र उत्तर
माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर आश्वासन (एसए) प्रशिक्षण वाउचरहरूको छुटकारा